Vakawanda Voteerera Kurudziro yeHurumende yeKufamba Vakapfeka "maMask"
Vanhu vakawanda vateerera kurudziro yemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa yekuti vapfeke zvidziviriro ka kuti mamask asi vamwe vachishora hurumende nekutadza kuvapa zvinhu izvi pachena sezvinoitwa nemapato ezvematongerwo enyika munguva yesarudzo zvekupa vanhu nhumbi.
Amai Sithembile Kawocha avo vanga vakavhara muromo nemhuno yavo nedhuku ravo rakasakara vanoti kupfeka mask chinhu chakanaka mukudzivirira kupararira kwehutachiona hwecoronavirus asi vanoti hurumende ingadai yakapa vanhu vose mamask aya pachena.
Amai Kawocha avo vanoita basa rekutenga nekutengesa vanoti havana mari yekutenga chidziviriro chinokurudzirwa navanachiremba sezvo vasiri kuenda kubasa.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuChinhoyi Amai Tafadzwa Karonga. VaMunesu Munesu vanoti zvidziviriro zvinokurudzirwa zviri kudhura nekudaro vakagadzira chavo vega.
VaMunesu vanoti vanhu havafanirwe kupfekera mapurisa asi kuchengetedza hutano hwavo. Kurudziro yekuti vanhu vapfeke mamask yakabva yaita kuti mitengo yacho ikwire zvakanyanya.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mamask ari kutengeswa nemari inobva padhora rimwechete kusvika pamadhora mashanu ekuAmerica.
VaJeremiah Maruza vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti mamaski haasi kuwanikwa uye paanowanikwa anenge achidhurira vakawanda.
Vamwe vanhu vanoti mari dzemafaindi kune munhu anowanikwa asina kupfeka mask iyo inobva pamadhora mazana mashanu kusvika pamadhora zvuru makumi matatu nezvitanhatu-ZWL$36 000-kana kugara mujeri kwegore kana kuti faindi nekugara mujeri yakawandisa.
Mutori wenhau webepa reMirrior VaDennis Kagonye vanoti kupfeka masiki kwakanaka zvikuru asi vanoti mutongo wekusapfeka masiki wakanyanya.
Gweta reMISA Zimbabwe Muzvare Nompilo Simanje vanoti mutemo uyu hauna kunyatsojeka uye unogona kuisa vanhu munjodzi. Vanotiwo Zimbabwe inokoshesa zvemitemo inoomesera vanhu kwete kushanda navo kuti vagadzirise matambudziko avanenge vatarisana nawo.
Vaimbove gurukota rezvehutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vanoti mutongo wakatarwa nehurumende wakanyanya vachiti hurumende inenge yave kuda kutsvaka mari sezvo dzemitero dzave shoma panguva ino yekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba.
Dr Madzorera vanoti mamask anonyanya kushanda kana munhu wese akaapfeka .
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti mapurisa anga asinei nevanhu vanga vasina kupfeka mamasiki mumaguta.
Vamwe vezvitoro zvikuru zvakaita seOK, TM, Gain neMetro Peech vanga vasinga bvumire vanhu vanga vasina mamask kupinda muzvitoro zvavo asi change chichishamisa ndechekuti vatengi vange vachizobvisa mamask kana vave mukati vachitenga. Vashandi vemuzvitoro vange vakabvisawo mamask avo.
Hurumende yakawedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba nemasvondo maviri kusvika musi wa17 Chivabvu ichibva yaisa mitemo inosanganisira kupfekwa kwemamask nemunhu wese anenge achifamba paruzhinji.